Fihaonana - Ny fahafatesan'ny famokarana amerikana | Martech Zone
Fihaonana - Ny fahafatesan'ny famokarana amerikana
Talata, Martsa 23, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Fa maninona no mivoka ny fivoriana? Inona avy ireo dingana azonao raisina mba hahatonga ny fivoriana hahomby? Niezaka ny hamaly ireo fanontaniana rehetra ireo aho tamin'ity fampisehoana mahatsikaiky (nefa marina) ity tany am-pivoriana.
Ity dia fomba fijery manatsara ny famelabelarana nataoko manokana. Ity fampisehoana amin'ny fivoriana efa tonga kelikely, nanoratra aho momba ny fivoriana ary famokarana taloha. Nanatrika fivoriana iray taonina aho, ary ny ankamaroan'izy ireo dia nandany fotoana be tokoa.
Rehefa nanomboka ny orinasako manokana aho dia nahita fa namela fotoana be dia be tsy ho voatanisa noho ny fandaharam-potoako tamin'ny fivoriana. Be fifehezana aho izao. Raha manana asa na tetik'asa hatao aho dia manomboka manafoana sy mandamina indray ny fotoana fivoriana. Raha manatona orinasa hafa ianao dia ny fotoanao ihany no anananao. Ny fivoriana dia afaka mihinana an'io fotoana io haingana kokoa noho ny asa hafa rehetra.
Amin'ny toekarena izay tsy maintsy mitombo ny famokarana ary mihena ny enti-manana dia azonao atao ny mijery akaiky ny fivoriana hahitana fotoana ahafahana manatsara azy roa.
Izaho dia teo am-piandohana namaky tato ho ato ary ireo boky ireo dia tena nanome aingam-panahy ahy tokoa momba ny orinasako sy ny famokarako manokana - Seth Godin's Linchpin: Tena ilaina ve ianao?, Jason Fried & David Heinemeier Hansson's Manamboatra indray sy Tim Ferriss ' Ny herinandro 4-Adiny. Ny boky tsirairay dia miatrika fivoriana ao amin'izy ireo.
Tags: fahafatesan'ny fivorianafivorianafamokarana
Ampitomboy ny pejy isaky ny fitsidihana ary mampihena ny tahan'ny fiantohana
Rental amin'ny lisitry ny mailaka, ny zavatra tokony ho fantatrao
Mar 24, 2010 amin'ny 11: 23 AM
Fampisehoana mahafinaritra Douglas, misaotra tamin'ny fizarana!
Niakatra tamin'ny boky vaovaon'i Godin aho tato ho ato ary nahita resaka mahaliana momba an'i Linchpin tao amin'ny Startups.com. Azonao atao ny manamarina azy eto http://bit.ly/b219d6
Mar 24, 2010 amin'ny 11: 44 AM
Fivoriana handaminana fivoriana. Ny fahafatesan'ny orinasam-pandraharahana rehetra dia fanoloana talenta sy fahaiza-manaon'ny tsirairay miaraka amin'ny fividianana sy fifandanjana ho an'ny ambany indrindra. Manaiky zavatra betsaka holazain'i Doug aho eto.
Fihenjanana tsara = fihenjanana mahasalama. Tiako ny miditra amina fivoriana izay efa namokatra zavatra tsy nisy fividianana. Antsoy hoe "porofon'ny foto-kevitra" io ary azonao antoka fa mpividy mpanatanteraka foana ianao. Andramo izany: mahasoa, miasa izy ary manohitra ny olona hieritreritra hafa.